Wenza kanjani amehlo aluhlaza - Ngithanda miphi imibala? | Bezzia
USusana godoy | 08/06/2021 14:00 | Maquillaje
Uyazi ukuthi ungawakha kanjani amehlo aluhlaza? Bangobunye bokubukeka okungokomzimba futhi okunothando kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi ngaphakathi kwayo, singathola nemibala ehlukahlukene eluhlaza, kepha noma kunjalo sikushiya amathiphu amahle kakhulu ukuze amehlo akho aqinise nakakhulu.
Uma ubona ukuthi uzama kepha ungawutholi umphumela olindelekile, Sizokunikeza imibono emihle kakhulu ukuze uthole okuningi ekubukekeni kwakho. I-Makeup ihlala ingumlingani wethu omuhle kakhulu kuzo zonke izikhathi zemini nobusuku nokusisiza ukuthi siqinise esikufunayo futhi sikufihle esingakufuni. Ake siqale ibhizinisi!
1 Ungakwenza kanjani ukwakheka kwamehlo okuluhlaza igxathu negxathu
2 Yimuphi umbala wezambiso wamehlo aluhlaza
3 Imibala yesithunzi sombala oluhlaza okotshani
4 Wenza kanjani amehlo aluhlaza ephathini
Ungakwenza kanjani ukwakheka kwamehlo okuluhlaza igxathu negxathu
Ukwakheka kwamehlo kuhlala kungenye yezinqubo esithanda ukuzenza. Kepha kuyiqiniso ukuthi ayihlali njalo njengoba besingafisa. Kulokhu, sizokushiya nesinyathelo ngesinyathelo esizokuthatha isikhathi esincane kakhulu, ngakho-ke, ake siqale ukusebenza!
Ukulungisa isikhumba kubalulekile. Ngakho-ke, khumbula ukufaka isithambisi esincane ebusweni bakho nangemva kwaso, isisekelo sakho osikhethile noma ukwakheka komcimbi. Uma kukhulunywa ngejwabu leso, kukhona namanye ama-primer alungele izithunzi ukuthatha umbala owengeziwe futhi zihlale isikhathi eside.
Manje kufanele khetha okungenani ama-shades amabili wombala ofanayo wesithunzi. Okulula kunazo zonke esizodlula kulo lonke ijwabu leso elihambayo futhi sizofiphaza kahle.
Ngombala omnyama sizoyinika ukujula okwengeziwe okugcizelela ukuphela kweso eya ngasethempelini futhi ibuye isebenzise engxenyeni yesibaya. Kepha yebo, kule ndawo yokugcina sizokufiphaza ukuze kungabikho ulayini.
Lapho sisondela izinyembezi, umbala uzoba lula, ngakho-ke siyidedela ibe namandla kakhulu kokunye ukweqisa esikubalulile.
Lapho ufaka izithunzi, sekuyisikhathi sokuthi khetha i-eyeliner. Kungaba ipensela noma uketshezi futhi ngalo sizodweba umugqa ophezulu, eduze nezinkophe.
Engxenyeni yezinyembezi sizonikeza ukuthinta kwenkanyiso. Kuncane kakhulu, iphuzu elincane nje ukuze iso lethu likhanye kabili.
Ekugcineni, akukho okufana nokufaka imascara encane ukunikeza ivolumu eyengeziwe esweni.
Njengezambiwa, usuvele uyazi ukuthi ungakuthola kokubili ngesimo sepensela, uketshezi noma ijeli. Kuyiqiniso ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi silandele induduzo yethu. Yize ku-gel kuzofanela sihlale sikufiphaza kancane ukuze lingamaki kangako. Kepha lokho sekuvele ukunambitheka kwawo wonke umuntu. Okwenzayo ukuthi uhlale nemibala evelele kakhulu ukwazi ukuthi ungawakha kanjani amehlo aluhlaza.
Umbala omnyama uzowunikeza umfutho omkhulu futhi uphelele uma ukhethe i-'Smokey Eyes '. Leso sitayela sentuthu esizoba inkanyezi yobusuku bakho obuhle kakhulu nemicimbi ebalulekile. Ngenkathi uma ufuna ukuba nemvelo ngokwengeziwe, ungahlala ukhetha i- i-eyeliner eluhlaza lokho kugcizelela ukubukeka. Omunye wemibala ye-eyeliner ongeke wayiphuthelwa nsundu. Amathoni we-Blues noma ompunga awanconyiwe.
Imibala yesithunzi sombala oluhlaza okotshani
Wenza kanjani amehlo aluhlaza nokuthi iziphi izithunzi ezibalungele? Impela ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa uzibuze lokhu, kahle, sizokutshela ukuthi kuliqiniso ukuthi lo mbala wamehlo ungaphatha imibala ehlukahlukene namathoni. Kepha sifuna ukuthi bakhanye ngokwengeziwe futhi ngenxa yalesi sizathu, akukho okufana nakho amathoni egolide, lapho ama-browns aya khona ngenye yemibono emihle yamehlo akho. Kepha futhi i-pink ingenye yezivumelwano ezinhle kakhulu futhi nsomi. Kepha kuyiqiniso ukuthi okwakamuva kuhlala kusezindebeni zawo wonke umuntu. Hhayi ngoba kungelona ithoni ephelele kepha kungenxa yokuthi kunzima ukukuhlanganisa ngendlela engokwemvelo ngokwengeziwe.
Wenza kanjani amehlo aluhlaza ephathini
Uzofaka isicelo ithunzi elimpunga elikhanyayo yonke indawo ijwabu leso.
Ungenza umehluko nge umthunzi wombala we-aergergine noma ompunga omnyama. Lokhu kuzoya ekhoneni elingaphandle leso futhi kufinyelele phakathi kwalo, kukufiphaze kahle.
Kusukela maphakathi nejwabu leso elibheke endaweni yesikhumba, umbala uyacaca futhi. Ngokuthinta isibani esikhwameni sezinyembezi.
Dlulisa ibhulashi elihlanzekile ukuhlanganisa lonke ijwabu leso kahle, ugweme izingqimba.
Line ngomthunzi omnyama bese usebenzisa i-mascara.
Manje uyazi ukuthi ungawakha kanjani amehlo aluhlaza ukuze ubheke emihlanganweni yakho elandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Maquillaje » Wenza kanjani amehlo aluhlaza